Madaxweyne ku xigeen Cameey oo si rasmi ah u furay Koobka Gobolada Puntland +Sawiro – SBC
Madaxweyne ku xigeen Cameey oo si rasmi ah u furay Koobka Gobolada Puntland +Sawiro
Posted by Webmaster on Juun 10, 2014 Comments
Gelinkii dambe ee maanta waxaa ka furmay garoonka kubadda cagta Mira awaare ee magaalada Groowe caasimada Puntland Koobka kubada cagta gobolada Puntland kaas oo ay ka qeyb galayaan dhamaan xulalka gobolada ay ka kooban tahay Puntland.
Masuuliyiin uu ugu horeeyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng C.xakiin Cumar Cameey, Wasiiro iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Garowe, Dadweyne farabadan iyo saxafiyiin ayaa ku sugnaa Garoonka kubada Cagta Mira awaare xiligii uu furmayay Koobkan.
Madaxweyne ku xigeen Cameey ayaa si rasmi ah u furay Koobka gobolada Puntland isagoo halkaas ka soo jeediyay Khudbad taabaneysa Koob ciyaareedkan gobolada Puntland isagoo u hambalyeeyay wasaarada Ciyaaraha sida ay u soo qaban qaabisay Koobkan xiisaha badan.
Waxaa lagu furay ciyaartii ugu horeysayna ay dhexmartay xulalka gobolka Nugaal oo difaacaneysa sanadkan Horyaalka Puntland iyo xulka gobolka Heylaan, iyagoo soo bandhigay ciyaar aad u xiisa badan weerar iyo weerar celisna laheyd.
Dadweynihii daawanayay ciyaartan oo aad ula dhacay ayaa waxa ay u kala muujinayeen taageero kala duwan labada dhinac ee ay kubadu dhex tiilay.
gaba gabadii ciyaarta waxa ay ku soo afmeertay Gool iyo Gool bar bar dhac iyadoo labada xul ay isku barbar dheceen .
Ciyaarahan oo ah kuwo siweyn looga sugayay Puntland oo dhan ayaa waxa isha ku haya dadweynaha ku dhaqan gobolada Puntland iyagoo gobol walba uu isha ku hayo natiijada ay keenaan xulkiisa u matalaya koobka .